Phupha nge-Igloo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igloo yayikade ilikhaya lesiNtu, abantu baseGreenland naseArctic. Okwangoku, uninzi luhlala kwizakhiwo zokuhlala okanye kumagumbi okungena, kodwa igloo isakhiwa njengendawo yokuhlala nendawo yokuhlala ubusuku bonke, umzekelo kuhambo lokuzingela.
Ulwakhiwo lwe-igloo lufuna ubuchule obuthile ukuze bungayi kuwa emva koko. Inokucocwa ukusuka kwiibhloko ezisikwe kwikhephu okanye inokumba kwindawo enkulu yekhephu. Kuninzi lwethu, indlu yekhephu inomdla kangangokuba ngamanye amaxesha inikelwa njengomtsalane kubakhenkethi bokuhlala ubusuku bonke. Eyona nto ikhethekileyo nge-igloo kukuba iqulathe ikhephu, oko kukuthi, amanzi aneqondo lobushushu eliphantsi okanye elingaphantsi komkhenkce, kodwa elinokugcina abantu beshushu xa bekwi-igloo, ngakumbi xa ubushushu bangaphandle bungamashumi amane nangaphezulu . amashumi amahlanu degrees ngaphantsi. Iqukethe ukubanda, kodwa inika ukhuseleko. Ezi ndawo zidlala indima ekutolikeni igloo njengophawu lwephupha.
1 Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngenxa yokuba yenziwe ngekhephu, igloo yindawo ebandayo, ephantse ibe yindawo yokuhlala. Kumnyama kwaye kuneendonga ezinomkhenkce. Nangona kunjalo, kukho umntu ngaphakathi, oko kukuthi, umntu ophilayo onomzimba ofudumeleyo. Njengophawu lokulala, inokubonisa umntu o-ethe-ethe ofihle emva kwegobolondo elibandayo, eligxothayo. Okanye kuyaphupha ukubanda ngokwasemphefumlweni, uswele uvelwano. Ukuba uphupha ngabahlobo okanye usapho kwi-igloo, kusenokwenzeka ukuba ubabone bengenantliziyo kwaye uyibone ngamehlo ephupheni ngoncedo lwendlu yekhephu.
Igloo njengophawu lwephupha lunokubhekisa kwikhaya lamaphupha. Unokungakhathali kwindawo okuyo, awukhathali ngentuthuzelo okanye ngoncedo. Nangona ithwala ubushushu, ayibonakali ekhayeni lakho. Isenokuba luphawu lokuba ubambe umlinganiswa wakho wokwenyani ukuba ubonakale ubandayo okanye womelele ngaphandle kunokuba kunjalo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, igloo limela indawo yokusabela kwihlabathi elinobutshaba. Ifuzisela isibeleko kwaye ke ngokunjalo ubufazi. Ukuphupha kunokukhathalela ukhuseleko ukulangazelela umama okanye ukufuna ukuzikhusela, ngakumbi ukuba wakha igloo ephupheni. Ukuba igloo lonakele okanye litshatyalalisiwe ephupheni, iphupha elo alinakukhuselwa.
Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolikwa kwengqondo
Igloo ephupheni linokubhekisa kwimicimbi yobudlelwane. Kwindawo ebandayo inokuba yeyakho ngqu zulwano iqabane okanye ubonise ukulahleka komdla wesondo. Kodwa isenokuthetha ukuba iphupha lifuna ukukhuselwa kubudlelwane okanye lifumane ukhuseleko kwimozulu engaphandle ebandayo nengonwabisiyo. Ubudlelwane bunokubonakala bubanda kodwa bufudumele kwaye buphila embindini wabo, embindini wabo.
Kumfazi, iphupha malunga ne-igloo linokufuzisela ukuba iyabamkela ubufazi bayo, iyabuqonda ubuchule bayo beemvakalelo, kwaye ke iyaphumla. Kumadoda, igloo inokuba yeyakho buqu umkhwa Ufuzisela ukuba akekho okanye uzikhusele.
Uphawu lwephupha «Igloo» - ukutolika kokomoya
Kwelinye icala, njengaso nasiphi na isakhiwo, igloo liquka oku Umgaqo oyintloko wabasetyhini. Kwelinye icala, ngenxa yomahluko phakathi kokushushu nokubanda, inokuba nefuthe lokomoya. Ungquzulwano bhekisa phakathi kwamandla aqinisekileyo nalawo angafanelekanga. Kuba ihlala yakhiwa ngumoya, igloo ikwangumqondiso wokujikeleza. ukukhula ngokomoya.